Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး ထုတ်ကုန်များ)
Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
tag ကို: မြင့်မားသောအပူချိန်စက်မှုအမြှေးပါးပွတ်တိုက်မှုရုပ်ရှင်ပွဲတော် , Pulse Valve ၏ NBR ရော်ဘာမြှေး , ဂတ်စ် Regulator အဘို့ရော်ဘာမြှေး
လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်၏ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း: 1, ပတ်ဝန်းကျင်အတော်လေးမြင့်မားသောစိုထိုင်းဆနှင့်ရေမျက်ရည်စက်လေးတွေနှင့်အခြားအခါသမယဖြစ်ပါသည်, ရေစိုခံလျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်ကိုရွေးချယ်ရပါမည်။ 2, ပု rated...
ညာဘက်ထောင့် Airflow ထိန်းချုပ်မှု solenoid valve
tag ကို: electromagnetic Pulse Injection ကို Valve , Electromagnetic Pulse Valve မြှေး , separator မြှေး Valve
နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း အလုပ်လုပ်ဖိအား 0.1 ~ 0.8MPa (0.2 ~ 0.6MPa ၏ဖိအားသုံးပြီးအကြံပြုထားသည်) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတန်း IP65 အပူချိန် -10 ကို C ~ 50 ကို C ဓာတ်ငွေ့အရင်းအမြစ်အလတ်စား အပူချိန်, ရေနံနှင့်ရေဖယ်ရှားပြီးနောက်, 55 စင်တီဂရိတ်အောက် 5...
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော solenoid valve
tag ကို: ဘွိုင်လာဘို့အနိမ့်အပူချိန် Solenoid Valve , Air ကိုသန့်စင်မှုအတွက် 1 Solenoid Valve , Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve
အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ဟာကိုလည်းမြှေးအဆို့ရှင် 'ဟုဆိုအပ်၏။ ဒါဟာဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးနှင့်သွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း၏မှုတ်မှုစနစ်အတွက်ချုံ့ဝေဟင်၏ "switch ကို" ဖြစ်ပါတယ်။...
solenoid valve ဟာစုပ်ယူ 220V 24V အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မြေမှုန့်
tag ကို: 1 လက်မ Pulse Solenoid Valve , rectangular မြှေးအမျိုးအစားဓါတ်ငွေ့ Solenoid Valve , High Quality ဓါတ်ငွေ့ Solenoid Valve
အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်သည်သွေးခုန်နှုန်းဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုကိရိယာများ၏လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကထိန်းချုပ်ထားချုံ့လေကြောင်း၏ဆေးထိုး switch သည်အတိုင်း duster blowout ပြွန်၏ interface ကိုမှာ installed...
Bolt ကခွံမာသီးလေကြောင်း solenoid valve
tag ကို:2လက်မအိတ်အမျိုးအစား Solenoid Valve , အနိမျ့ဖိအားညာဘက်ထောင့် Solenoid Valve , မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြှေး Solenoid Valve
ညာဘက်ထောင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်သည်နစ်မြုပ်လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်, တိုက်ရိုက် Pass...
1 လက်မ solenoid valve 220V ဆက်သွယ်ရေး
tag ကို: Air ကို Flow ထိန်းချုပ်ရေး Solenoid Valve 24V , လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve , ညာဘက်ထောင့်လေတပ် Solenoid Valve
လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameters များကို: လုပ်ငန်းခွင်ဖိအား: 0.2-0.6MPa အလုပ်လုပ်အလတ်စား: စင်ကြယ်သောလေကြောင်းရန် အလုပ်လုပ်ဗို့: DC24V, AC220V အလုပ်လုပ်လက်ရှိ: 800mA / 60mA ပတ်ဝန်းကျင်: 65 ဒီဂရီအပူချိန် -10 ဒီဂရီ...
သွေးခုန်နှုန်း deduster ၏ Pneumatic လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်
tag ကို: Air ကိုကွန်ပရက်ဆာ ,3လက်မ Solenoid Valve , ဖုန်မှုန့် Filter ကို Pulse Valve , Solenoid Valve Pneumatic မြှေး Valve
DMC-Z-40 လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင် pulse
tag ကို: DMF Z ကို-20 24V Solenoid Valve , 24V High Quality မြှေး Valve , အမျိုးအစားဓါတ်ငွေ့ Solenoid Valve မြှေး
စမ်းသပ်ခြင်းခွဲခြား: 1, ထုတ်ကုန်အဆို့ရှင်၏ 2, 3,4နဲ့9လိုအပ်ချက်များကိုသူတို့စက်ရုံစွန့်ခွာမတိုင်မီတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်း၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များကကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ထားရပါမည်။ 2, ယင်းစစ်ဆေးရေး၏5နှင့် 8...
ဟိုက်ဒရောလစ် solenoid valve ဟာ 5V DC က
tag ကို: လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve 24 Volt , Air ကို Electromagnetic မြှေး Pulse Valve , ညာဘက်ထောင့် Solenoid Valve 24V
performance စမ်းသပ်: 1, ပွင့်လင်းဗို့အားစမ်းသပ် လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်၏လေကြောင်းဝင်ပေါက်ဖိအားစင်ကြယ်သောလေထု၏အမည်ခံဖိအားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်, နှင့်အမည်ခံဗို့အား၏ 85% ကို solenoid valve အပေါ် input ကိုဖြစ်ပါသည်, 0.03 ရဲ့ width...
အမြှေးပါးချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ solenoid valve မြှေး
tag ကို: IP68 ဓါတ်ငွေ့မြှေးအမျိုးအစား Solenoid Valve , ညာဘက် Pulse Air ကို 24V Solenoid Valve , အမြှေးပါး Solenoid Air ကို Valve မြှေး
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ: 1. ထုတ်ကုန်များ၏အလုပ်လုပ်ဖိအား 0.1MPa ~ 0.7MPa ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အလတ်စား degreasing နှင့်ရေကုသမှုပြီးနောက်လေထုဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များ၏အမည်ခံလေထုဖိအားပြည်နယ်လက်အောက်တွင် 2. solenoid valve ၏ပြုပြင်ဗို့အားအဆိုပါ rated...
စက်မှု DMF T က solenoid valve
tag ကို: လူမီနီယမ် 1 / Solenoid Valve 2in , ချေးကိုခံနိုင်ရည် Electromagnetic Pulse Valve , သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve 220V ဆက်သွယ်ရေး
installation နည်းလမ်း အသုံးမပြုမီ, အစိတ်အပိုင်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းပျက်စီးနေကြသည်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ မထည့်သွင်းမီ, ဓာတ်ငွေ့ပေးဝေရေးပိုက်လိုင်းအတွက်သေးလေခတ်နဲ့ကို clean up ။ install လုပ်သည့်အခါ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှု၏ညှနျကွားဖို့နဲ့ nozzle...
အိတ် filter ကို 1/2 solenoid valve
tag ကို: မြင့်မားသောဖိအား 1/2 Solenoid Valve , DCF လူမီနီယမ်အလွိုင်းလျှပ်စစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Valve , Valve လားရာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလျှပ်စစ်စွမ်းအား Electromagnetic
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလိုအပ်ချက်များကို အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း duster ၏ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးယူနစ်များ၏လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တင်းကြပ်စွာပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။...
tag ကို: Pulse ဂျက် Electromagnetic Pneumatic Valve , ဖုန်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် electromagnetic Pneumatic Valve , rectangular Pulse ဂျက်မြှေး Valve
သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ၏စံ
tag ကို: ပလပ်စတစ် Solenoid Valve , ကြေးနီခန္ဓာကိုယ် Solenoid Valve , Pulse Solenoid Valve ၏ installation
အဆိုပါ solenoid valve ဟာအရည်၏ဥတုသာညီမျှသည်။ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တစ်ဦးသိုလှောင်မှုနဲ့ဖြန့်ချိသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးဥပစာစေခြင်းငှါ, solenoid valve နှင့်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်နှစ်ဦးစလုံးလေဝင်လေထွက်နေကြသည်။ အဆိုပါ solenoid valve...
မြင့်မားသောဖိအား solenoid valve
tag ကို: အမြင့်ဖိအား Solenoid Valve ၏ဈေးနှုန်း , အမြင့်ဖိအား Solenoid Valve အမျိုးအစား , ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား Solenoid Valve ၏ဈေးနှုန်း
အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်များ၏အလုပ်လုပ်လိုအပ်ချက်များကို: အလုပ်လုပ်ဖိအား: Z ကို type ကိုအဆို့ရှင်: 0.4 ~ 0.6Mpa Y ကအဆို့ရှင်ရိုက်ပါ: 0.2 ~ 0.6Mpa ZM အမျိုးအစားအဆို့ရှင်: 0.4 ~ 0.6Mpa ။ လေတပ်အရင်းအမြစ်အလတ်စား: deoiling, ရေကုသမှု filtration...
tag ကို: Pulse Solenoid Valve ၏နိယာမ , Pulse Solenoid Valve အမျိုးအစား , Electromagnetic Pulse Valve အမျိုးအစား
solenoid valve ၏ဈေးနှုန်း
tag ကို: Pulse Valve ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု , Pulse Valve ၏ဈေးနှုန်း , တိုက်ရိုက် Pass ကို Electromagnetic Pulse Valve
tag ကို: DMF-Z ကို-40 Pulse Valve , DMF-Z-50s Pulse Valve , DMF-Z-70 ညာဘက်ထောင့် Solenoid Valve
Submersed သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ဟာစီးရီး
tag ကို: သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve စီးရီး , တိုက်ရိုက် Angle Dedusting Pulse Valve , တိုက်ရိုက် Angle Dedusting Solenoid Valve
ခြောက်လအုပ်စုခွဲသွေးခုန်နှုန်း solenoid valve
tag ကို: DCF-4 Differential Valve , လက်မ Electromagnetic Pulse Valve , တဦးတည်းလက်မနှင့်တစ်ဝက် Solenoid Valve
နစ်မြုပ်သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve
tag ကို: DMF-Z-40 Electromagnetic Pulse Valve , DMF-Z ကို-40 Electromagnetic Pulse Valve , DMF-Z-50s Electromagnetic Pulse Valve
လက်သမားစက်ပစ္စည်း၏ Pulpout ဆိုင်ကလုန်းမြေမှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: စက် Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Woodworking , စက်မှု Pulse ဂျက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , Woodworking စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး
ထုတ်ကုန်များပြရန် ဒါဟာလေကြောင်းဝင်ပေါက်, လေထွက်ပေါက်, cylindrical ခန္ဓာကိုယ်, ကန်တော့ချွန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ပြာမှုန်ရေပုံးပါဝင်ပါသည်။ ဒါဟာစီမံခန့်ခွဲဖွဲ့စည်းပုံထုတ်လုပ်ရန်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေမယ့်, တပ်ဆင်ရန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။...
2 လက်မ rectangular သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve
tag ကို:2လက်မ Rectangular Pulse Solenoid Valve , ဖုန်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်အသုံးပြု Solenoid Valve , လက်မညာဘက်ထောင့် Pulse Solenoid Valve
အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုကိရိယာလျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အပြောင်းအရွေ့၏ armature စေသည်လေထုအခန်းထဲက, ထိုအဆို့ရှင်အပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်နောက်ဘက်လေထုအခန်းထဲကလျင်မြန်စွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်, အမြှေးပြန်လှုံ့ဆျောသည်,...
ညာဘက်ထောင့် Airflow ထိန်းချုပ်မှု solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
solenoid valve ဟာစုပ်ယူ 220V 24V အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မြေမှုန့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Bolt ကခွံမာသီးလေကြောင်း solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
1 လက်မ solenoid valve 220V ဆက်သွယ်ရေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွေးခုန်နှုန်း deduster ၏ Pneumatic လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DMC-Z-40 လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင် pulse အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဟိုက်ဒရောလစ် solenoid valve ဟာ 5V DC က အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမြှေးပါးချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ solenoid valve မြှေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု DMF T က solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ် filter ကို 1/2 solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ၏စံ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောဖိအား solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
solenoid valve ၏ဈေးနှုန်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Submersed သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ဟာစီးရီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခြောက်လအုပ်စုခွဲသွေးခုန်နှုန်း solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နစ်မြုပ်သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်သမားစက်ပစ္စည်း၏ Pulpout ဆိုင်ကလုန်းမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2 လက်မ rectangular သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး from China, Need to find cheap Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Pulse Valve ၏ Nbr ရော်ဘာမြှေး, We'll reply you in fastest.
GXCD စီးရီး tubular electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Related Products List: ဖုန်မှုန့် Collections , စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , Desulfurization ကောက်ခံရေး , filter စာနယ်ဇင်း